Dulucdii Hadal ee Madaxweyne Deni iyo Doorka Bulsho ee Reer Puntland (dhegayso) – Radio Daljir
Dulucdii Hadal ee Madaxweyne Deni iyo Doorka Bulsho ee Reer Puntland (dhegayso)
Febraayo 8, 2020 4:54 g 0
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdillaahi Deni ayaa shalay Jimce ahayd hadal uu jeediyey xoogga ku saaray arrimo door ah oo quseeya dawladnimada Soomaaliya ee heer dawlad dhexe iyo tan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka.
Madaxweynaha ayaa saluugmo xooggan ka muujiyey marxaladdu haatan dalka Soomaaliya uu marayo, siiba marka ay timaaddo dawladda dhexe ee federaalka iyo siyaasaddeeda xaaliga ah ee haatan.
Madaxweyne Deni ayaa dawladda dhexe ee federaalka ku eedeeyey wiiqitaan lagu sameeyey hannaankii federaalka ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiseen, ku tumasho xagga sharciyada dalka ah, ku tagrifal awoodda dawladeed ah, burburin dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka, mugdigelinta doorashada dalka, si xun u adeegsiga dhaqaalaha, warbaahinta iyo arrimo kale.
Madaxweynaha Puntland oo hadalka uu shalay jeediyey uu ahaa mid ka soo baxay fadhi labo maalmood oo xiriir ah ay lahaayeen Golaha Wasiirada Puntland ayaa imaanaya iyadoo ay jirto kala maanduwanaan ka dhex-oogan dawladda dhexe ee federaalka iyo qaar ka mid ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe, siiba Puntland iyo Jubbaland.
Haddaba si aan u sii bidhaaminno dulucda hadal ee Madaxweynaha iyo doorka looga fadhiyo bulshada Puntland, waxaannu wareysi la yeelanay Cabdisalaan Maxamuud Jaamac Salwe oo ah siyaasi, suxufi, kana faallooda arrimaha siyaasadda, waxaana marka hore waydiinney waxa uga baxay hadalkii Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdillaahi Deni.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 470 Wararka 18909
Warka Caweysin iyo Ayaanle Cabdulaahi Jaamac, Daljir Caabudwaaq (dhegayso)
Boosaaso iyo tirakoobka ciidamada Puntland (daawo)